ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သို့မဟုတ် လှပရဲရင့်သူ | မိုးစက်မှော်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သို့မဟုတ် လှပရဲရင့်သူ
Filed under: အတွေ့အကြုံ, ဆောင်းပါး —6Comments
မွန်းလွဲတစ်နာရီတွင် စတင်မည့် တရားခွင်နှင့် တရားခွင်သို့ လာရောက်မည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို စောင့်နေကြသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးတွင် ပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုကြီးအမှတ်-၄၇/၂၀၀၉၊ နိုင်ငံတော်အားနှောင့်ယှက်ဖျက်စီးလိုသူများ၏ဘေးအန္တရယ်မှကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့်ဥပဒေပုဒ်မ ၂၂ အရ တရားစွဲဆိုထားပြီး ယနေ့တွင်သူမကို စစ်ဆေးရန်ရှိသည်။
သြစတြေးလျနှင့် ဗြိတိသျှသံအမတ်များ၊ စင်ကာပူသံအမတ်ကြီးတို့ကို ရှေ့ဆုံးတန်းတွင်တွေ့ရသည်။ အခြားသံတမန်များမှာလည်း သံရုံးမှ နိုင်ငံရေးဆိုင်ဆိုင်ရာမြန်မာတာဝန်ခံများနှင့်အတူရှိနေကြသည်၊ ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းထောက်များမှာလည်း အခွင့်အရေးကို ပြည့်ပြည့်၀၀ရစိမ့်သောငှာ တရားခွင်နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် နီးနိုင်သမျှနီးအောင် နေရာယူနေကြသည်။
ကင်မရာ၊ ရီကော်ဒါစသည်တို့ကို ယူဆောင်ခွင့်မရှိသဖြင့် အကြားစွမ်းရည်၊ အမြင်စွမ်းရည်တို့ဖြင့်သာ တတ်နိုင်သမျှမှတ်တမ်းတင်သတင်းရေးသားရမည်ဖြစ်သဖြင့် မြင်သာကြားသာသော နေရာကို ဘောင်အတွင်းမှ သတင်းထောက်များ ကြိုးစားယူနေကြရခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုစဉ်တွင်ပင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှာ တရားခွင်သို့ ၀င်ရောက်လာလေသည်။ အားလုံးက မတ်တပ်ရပ်ကာ သူမကို ၀ိုင်းကြည့်ကြသည်။ ရဲမေများကလည်း အသင့်အနေအထားနှင့်ရှိကြသည်။ သူမနှင့်နီးနိုင်သမျှနီးအောင် တရားခွင်နှင့်နီးနိုင်သမျှနီးအောင် ပရိသတ်မှာတိုးကပ်သွားကြသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှာ ပရိသတ်ကိုတစ်ချက်ကလေးမှ မကြည့်ပါ၊ သူမရှေ့နေဦးဉာဏ်ဝင်းနှင့်တွေ့ပြီး စကားပြောပါသည်။ ထို့နောက် တရားခွင်သို့ မကြာမီတင်ပြရန်ရှိပုံရသည့် လျှောက်လွှာတစ်စောင်ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဖတ်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။
ခရမ်းနုရောင် အင်္ကျီ၊ ခရမ်းရင့် အဖြူရောင်ကြက်ခြေခတ်ပတ်လည်စင်း ပုလဲဖောက်ချည်လုံချည်နှင့် အသားအရည်ကောင်းသော ပေါ်လွင်သည့်ပိန်ပါးပါးကိုယ်ထည်နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှာ ကြည့်ကောင်းနေဆဲဖြစ်သည်။ ကျန်းမာပုံလည်း ရသည်။
အင်တာနက်နှင့် စာစောင်တချို့တွင်သာ ဓါတ်ပုံကို မြင်ခဲ့ဖူးသော စာရေးသူအတွက် လူကိုယ်တိုင် ပထမဆုံးမြင်ဖူးခြင်းဖြစ်သည်။ ဆံပင်ကို ဖြန့်ချထားမည်ဆိုပါက ကျောထိရုံသာရှိမည်ဖြစ်ပြီး ယနေ့တွင်တော့ နောက်ဘက်မှစုသိမ်းကာ အတွင်းတွင်သားရေကွင်းပါအမည်းရောင်အ၀တ်(ဆံပင်စည်းကြိုး)ဖြင့် ပတ်စည်းထားသည်။ မိတ်ကပ်ပါးပါးသာ လိမ်းထားပုံပေါ်ပြီး ပန်းမပန်ထားပါ၊ အသားအရေနှင့် ၀တ်စုံမှာ မိန်းမပီသသည့်အသွင်ရှိသည်။
နောက်ကျောမှကြည့်နေသော ပရိသတ်မှာ သူမလည်တိုင်ကိုပါမြင်တွေ့ရပြီး အညိုရောင်ကော်ကိုင်းမျက်မှန်(ကိုင်းကြီးမဟုတ်၊ ယခု ခေတ်စားနေသောအရွယ် ကိုင်းသေး) နှင့်စာဖတ်နေသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှာ တည်ငြိမ်နေပြီး ရုံးအလုပ်လုပ်နေပုံပေါက်သည်။
သူမကိုကြည့်ရသည်မှာ တည်ငြိမ်နေပြီး ယခုအမှုအတွက် သက်သောင့်သက်သာဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ စာဖတ်ပြီးနောက် မျက်မှန်ကို မျက်နှာမှဖြုတ်သိမ်းကာ ချည်လက်ကိုင်အိတ်အနက်(အိတ်သေး)ထဲ ထည့်လိုက်သည်။
မိုးအုပ်နေသော်လည်း အိုက်လောင်ဆဲအခန်းထဲတွင် လက်ကိုင်ပ၀ါ အဖြူလေးနှင့် သူမပါးကို တို့ပွတ်သည်ကို တစ်ကြိမ်မြင်ရသည်။ ပထမအကြိမ်မြင်ဖူးသောမိမိကို တစ်ပတ်ခန့်အတွင်း နှစ်ကြိမ်မြင်ဖူးသော သံတမန်တစ်ဦးက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှာ ပြီးခဲ့သည့်အပတ် ၄င်းမြင်တွေ့သည်နှင့် နှိုင်းယှဉ်လျင် ယနေ့အနီးငယ် ဖျော့တော့ပုံရကြောင်း ပြောပြသည်။
စာဖတ်ပြီး အမှုသည်များထိုင်သည့်ခုံသို့ ထလာပြီးထိုင်တော့မှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပရိသတ်ကို လှမ်းကြည့် ရယ်ပြ စကားတစ် ခွန်းနှစ်ခွန်းလှမ်းပြောသည်၊ ”လာကြတဲ့အတွက် ၀မ်းသာတယ်” ဟု ပြောတာသာ ကြားသည်။
မွန်းလွဲတစ်နာရီထိုးစမှာ တရားခွင်စာရေးက အမှုတွဲပြင်ဆင်၊ တရားခွင်ပြင်ဆင်ပြီး မကြာမီမှာပဲ ရုံးစသည်။ တရားသူကြီးနှစ်ဦးထွက်လာပြီး နေရာယူသည်။ ပရိသတ်က မတ်တပ်ရပ်ပေးရသည်။ တရားခွင်စာရေးက လက်နှိပ်စက်စမ်းလိုက်သည်၊ လက်နှိပ်စက်သံတဖြောင်းဖြောင်းစကြားရပြီ။
တရားရုံးများတွင် လက်နှိပ်စက်သာ သုံးနေဆဲဖြစ်သည်၊ ကွန်ပျူတာကို အသုံးမပြုနိုင်သေး၊ ယခုကဲ့သို့ မီးမမှန်သောကာလတွင် လက်နှိပ်စက်ကသာ အကောင်းဆုံးအနေအထားတွင် ရှိနေဆဲဟုသာ တွေးလိုက်မိသည်။
တရားခွင်ပုံစံမှာ တရားသူကြီးနှစ်ဦးထိုင်ရန်နေရာ (အမြင့်တွင်)၊ နောက်ခံတွင် ပုံမှန်တရားခွင်များကဲ့သို့ နိုင်ငံတော်အလံရှိမနေဘဲ နိုင်ငံတော်အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်သာရှိသည်။ မည်သည့်ပုံမှတော့ ချိတ်ဆွဲမထားပေ။ တရားခွင်တွင် တရားသူကြီးများနှင့် စကားပြောဆိုလျှင် စင်ပေါ်တက်ပြီးမှ စကားပြောနိုင်သည်။
တရားသူကြီးနှစ်ဦးရှေ့ဘက်စင်အောက်တွင် တရားသူကြီးများ၏ လက်ယာဘက်ခြမ်း၌ တရားစွဲဥပဒေအရာရှိများထိုင်ပြီး လက်ဝဲဘက်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်း၊ မ၀င်းမမနှင့် မစ္စတာရက်တောတို့၏ ရှေ့နေများဖြစ်သော ဦးဉာဏ်ဝင်း၊ ဦးလှမျိုးမြင့်၊ ဒေါ်ခင်ဌေးကြွယ်နှင့် ဦးခင်မောင်ဦးတို့ ထိုင်ကြလေသည်။ တရားသူကြီးများနှင့် ရှေ့နေများထိုင်နေပုံမှာ ထောင့်မှန်အနေအထား ဖြစ်သည်။
တရားသူကြီးများနှင့် မျက်ဆိုင်ခုံတန်းတွင်တော့ တရားခွင်ကိုကြည့်နေသောပရိသတ်ဘက်မှကြည့်ပါက ၀ဲဘက်အစွန်တွင် မစ္စတာရက်တော(မတ်မတ်အနေအထားဖြင့်)၊ ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်း၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ မ၀င်းမမတို့ သုံးပေခန့်အကွာအဝေးစီဖြင့် ထိုင်နေကြသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ ထိုင်သည့်နောက်တန်းတွင် သစ်သားဖြင့်အပိတ်တန်းကာထားပြီး ယင်းနောက်ဘက်တွင် ခုံတန်းသုံးတန်း ချထားသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ထိုင်ပြီးနောက် ယင်းခုံတန်းသုံးတန်း၏ တစ်တန်းတွင် အမျိုးသမီးရဲအရာရှိ ခြောက်ဦးဝင်ထိုင်ကြသည်။ ငါးဦးက အပြာနုရင့်ရဲယူနီဖောင်းနှင့်ဖြစ်ပြီး တစ်ဦးမှာ အကျဉ်းထောင်ယူနီဖောင်း(ကာကီရောင်)နှင့်ဖြစ်သည်။
ရဲအရာရှိများနောက်တွင် သစ်သားတန်းနှင့်နောက်တစ်ကြိမ်ကာရံထားပြီး သံတမန်များ စထိုင်သည်။ သံတမန်တို့ထိုင်ပြီး ငါးတန်းမြောက်မှာမှ သတင်းထောက်များထိုင်ကြရသည်။
တရားခွင်သို့တက်ရောက်နားထောင်သော ပရိသတ်အတွက် မင်းလမ်းတစ်ဖက်တစ်ချက်လျင် ခုံငါးလုံးချ ကိုးတန်း (လူ ၉၀ စာ) ထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ လောင်အိုက်နေသောအခန်းတွင်း မျက်နှာကျက်ပန်ကာ ရှစ်လုံးတန်း သုံးတန်း ၂၄ လုံးတပ်ထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ တရားခွင်လုပ်ထားသောအဆောက်အဦကြီးတစ်ခုလုံးမှာ ၃၅ ပေ၊ ပေ ၈၀ ခန့်ရှိ တစ်ထပ်အဆောက်အအုံဖြစ်သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရှေ့နေဦးဉာဏ်ဝင်းက တရားသူကြီးများထိုင်ရာ စင်ပေါ်တက်သွားပြီး တင်ပြချက်လျှောက်လွှာကို တင်တာတွေ့ရသည်။ တရားသူကြီးနှစ်ဦး တစ်ဦးလျှင်လျှောက်လွှာတစ်စောင်စီရပြီး ကြည့်ကြသည်။
”အမှုသည်ဖြစ်တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ရှေ့နေဖြစ်တဲ့သူတို့ ဆွေးနွေးခွင့်ရလိုကြောင်း၊ အမှုသည်နဲ့ရှေ့နေ သေချာတွေ့ခွင့် မရ သေးကြောင်း၊ သို့မို့ကြောင့် ဥပဒေပါအခွင့်အရေးအရ တွေ့ဆုံခွင့်တစ်နာရီခန့်ဖြစ်ဖြစ် ရလိုကြောင်း တောင်းဆိုပါကြောင်း စသည်ဖြင့်” ဦးဉာဏ်ဝင်းက ရုံးတော်သို့ လျှောက်ထားသည်။
တရားသူကြီးနှစ်ဦးတိုင်ပင်ကြပြီး တစ်ခုခုကို ဖတ်ပြသည်။ တရားစွဲဥပဒေအရာရှိက တစုံတရာထပြောပြန်သည်။ နောက်တော့ လျှောက်လွှာနှင့်ပတ်သက်၍ ဘာပြောသည်ကို သေချာမသိတော့ပါ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို စစစ်ရန်ပြောသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ထိုင်ရာမှထပြီး တရားသူကြီးနှစ်ဦးရှေ့ အစစ်ခံရမည့်အမှုသည်ထိုင်ရန်ရှိသည့်ခုံတွင် ၀င်ထိုင်လိုက်သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို သူမရှေ့နေက စတင်မေးမြန်းခြင်းမပြုဘဲ တရားသူကြီးဦးညီညီစိုးကပင် မေးမြန်းပါသည်။ နာရီဝက်မရှိတရှိတွင်ပြီးသည်။ တရားသူကြီးမေးမြန်းသည့်မေးခွန်းများနှင့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဖြေကြားသည့်အဖြေများကို ပီပီသသမကြားရသော်လည်း တရားခွင်စာရေးလက်နှိပ်စက်နှင့်မှတ်တမ်းတင်ရန် တရားသူကြီးကမေးခွန်းနှင့်အဖြေကို ဆီလျော်စွာ စာခေါ်ပေးချိန်တွင် အများစုကိုကြားရပါသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သူမဖြေသည့်အဖြေနှင့် တရားသူကြီးစာခေါ်ချိန် စာသားအနည်းငယ်လွဲပါက သူမဖြေကြားထွက်ဆိုသည့် အတိုင်းအမှန်ကိုသာ မှတ်တမ်းတင်ရန် နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ပြောဆိုသည်ကိုတွေ့ရပြီး တရားသူကြီးကလည်း အစ်မကြီး ထွက်ဆိုသည့်အတိုင်း မှတ်တမ်းတင်ပေးပါမည်ဟု ပြောပါသည်။ တရားသူကြီးက မစ္စတာရက်တော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ခြံအတွင်းဝင်ရောက်ပုံကို မေးမြန်းပါသည် (အမေးအဖြေအပြည့်အစုံကို မေ ၂၇ ထုတ် အစိုးရသတင်းစာများတွင် ဖော်ပြပြီးဖြစ်သဖြင့် မဖော်ပြတော့ပါ)။
အမေးအဖြေထဲတွင် တရားသူကြီးက ”မစ္စတာဂျွန် ၀ီလီယံရက်တော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အိမ်သို့ရောက်ရှိချိန်က အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ရှိပါသလား” ဟု မေးသည်ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ”ခြံအတွင်းမှတော့ မရှိပါ၊ ခြံအပြင်မှာ ရှိ မရှိ မသိပါ” ဟု ပြန်လည်ဖြေကြားပါသည်။
တရားခွင်အပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို စစ်ဆေးမေးမြန်းမှုအပြီးတွင် သူမထထွက်လာတော့ မျက်နှာကြည်လင်နေဆဲဖြစ်သည်၊ သူမရှေ့နေဦးဉာဏ်ဝင်းကိုလည်း ပြုံးပြုံးနှင့်တွေ့လိုက်သည်။ ဦးဉာဏ်ဝင်းကော၊ တရားစွဲဥပဒေအကျိုးဆောင်များပါ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မေးခွန်းမမေးကြပါ။ တရားသူကြီးက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ရုံးရှေ့ထွက်ဆိုချက်(လက်နှိပ်စက်မူ)ကို ဖတ်ပြပြီး ထွက်ဆိုမှုကို အတည်ပြုပါသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမှုမှာ မွန်းလွဲ ၁ နာရီ ၄၈ မိနစ်တွင်ပြီးသည်။ တရားခွင်ကို နောက်တစ်ရက်သို့ ရွှေ့ဆိုင်းကြောင်းပြောကာ မစ္စတာရက်တောအမှု ၄၈/၂၀၀၉ ကို ဆက်လက်စစ်ဆေးပါသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တရားခွင်မှမပြန်မီ ပရိသတ်ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီး ပြုံးပြပါသည်၊ စကားတစ်ခွန်းနှစ်ခွန်းပြောသည်။ ကြားလိုက်ရသည်က ”တွေ့ရတာ ၀မ်းသာပါတယ်” ဟူ၍။ ပရိသတ်အများစုကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မသိပါ၊ သူမရှေ့နေဦးဉာဏ်ဝင်းက နောက်မှတိုးတိုးကပ်ပြောနေသည်ကိုတွေ့သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြန်သည်နှင့် သံတမန်များလည်း ပြန်ကုန်ကြသည်။ သတင်းထောက်များလည်း ပြန်တော့သည်။ မစ္စတာရက်တောကတော့ ရှပ်အင်္ကျီကို တံတောင်ဆစ်အထိလက်ခေါက်ဝတ်ပြီး ကာကီရောင်နုစတိုင်ဘောင်းဘီဝတ်လာသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြန်သွားသည့်အထိ တရားခွင်တွင် ဖြောင့်ဖြောင့်မတ်မတ်ထိုင်နေဆဲ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မစ္စတာရက်တောကို တရားခွင်တွင် တစ်နာရီခန့်ရှိနေစဉ်အတွင်း တစ်ကြိမ်မှ ကြည့်မသွားခဲ့။
အင်းစိန်ဗဟိုအကျဉ်းထောင်မှ ပြန်လည်ထွက်ခွာလာတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ထားရှိရာ အကျဉ်းထောင်တွင်းမှ အရာရှိရိပ်သာသို့ပင် စောင်းငဲ့ကြည့်ခဲ့သေ
အင်တာနက်နှင့် စာစောင်တချို့တွင်သာ ဓါတ်ပုံကို မြင်ခဲ့ဖူးသော စာရေးသူအတွက် လူကိုယ်တိုင် ပထမဆုံးမြင်ဖူးခြင်းဖြစ်သည်။ ဆံပင်ကို ဖြန့်ချထားမည်ဆိုပါက ကျောထိရုံသာရှိမည်ဖြစ်ပြီး ယနေ့တွင်တော့ နောက်ဘက်မှစုသိမ်းကာ အတွင်းတွင်သားရေကွင်းပါအမည်းရောင်အ၀တ်(ခေါင်းစည်းကြိုး)ဖြင့် ပတ်စည်းထားသည်။ မိတ်ကပ်ပါးပါးသာ လိမ်းထားပုံပေါ်ပြီး ပန်းမပန်ထားပါ၊ အသားအရေနှင့် ၀တ်စုံမှာ မိန်းမပီသသည့်အသွင်ရှိသည်။
”အမှုသည်ဖြစ်တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ရှေ့နေဖြစ်တဲ့သူတို့ ဆွေးနွေးခွင့်ရလိုကြောင်း၊အမှုသည်နဲ့ရှေ့နေ သေချာတွေ့ခွင့် မရ သေးကြောင်း၊ သို့မို့ကြောင့် ဥပဒေပါအခွင့်အရေးအရ တွေ့ဆုံခွင့်တစ်နာရီခန့်ဖြစ်ဖြစ် ရလိုကြောင်း တောင်းဆိုပါကြောင်း စသည်ဖြင့်” ဦးဉာဏ်ဝင်းက ရုံးတော်သို့ လျှောက်ထားသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တရားခွင်မှမပြန်မီ ပရိသတ်ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီး ပြုံးပြပါသည်၊စကားတစ်ခွန်းနှစ်ခွန်းပြောသည်။ ကြားလိုက်ရသည်က ”တွေ့ရတာ ၀မ်းသာပါတယ်” ဟူ၍။ပရိသတ်အများစုကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မသိပါ၊ သူမရှေ့နေဦးဉာဏ်ဝင်းက နောက်မှတိုးတိုးကပ်ပြောနေသည်ကိုတွေ့သည်။
အင်းစိန်ဗဟိုအကျဉ်းထောင်မှ ပြန်လည်ထွက်ခွာလာတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ထားရှိရာ အကျဉ်းထောင်တွင်းမှ အရာရှိရိပ်သာသို့ပင် စောင်းငဲ့ကြည့်ခဲ့သေးသည်။
02/06/2009 at 1:34 pm
လှပရဲရင့်သူတဲ့။ ဆရာကီးနော်၊ အဲလို ပြောရဘူးနော်။ ရှော့ရှိတယ်။ 😀
I am soo grateful to you for uploading the story. Thanks to you, I can vividly imagine the scene there. CONGRATULATIONS.
02/06/2009 at 9:47 pm
အပိုစာသားတွေ၊ ဘက်လိုက်မှုတွေ မပါပဲ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း မြင်ရတဲ့ မြင်ကွင်းကို အရှိအတိုင်းရေးသွားပေးတဲ့ နင့်စာလေး ဖတ်ရတာ ကောင်းလှတယ်။
03/06/2009 at 4:11 pm
မြင်ကွင်းကို ကိုယ်တိုင်ရောက်သွားသလို ရေးပြပေးတဲ့အတွက် တကယ့်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်
04/06/2009 at 11:15 am
Very descriptive and illustrative about the proceeding of Daw Suu’s trial.
Why don’t you translate it into English and try to submit it to foreign media such as The Guardian, The Mirror?
11/06/2009 at 6:14 pm
« She’s calm and brave: Beautiful and Powerful